Shortcuts yave kuwanikwa yeWaze uye tinokuratidza maitiro ekuishandisa | IPhone nhau
Iyo itsva vhezheni yekushandisa Waze inoita kuti ienderane neyekutonhora Shortcuts ficha iyo yakasvika yekupedzisira Nyamavhuvhu 2018 uye nhasi tichaona mashandisiro atingaite iyi iOS basa reWaze. Pakutanga, mudiwa wedu anodiwa Siri akangotipa ruzivo nezve mafambiro kuburikidza neiyo yeApple app, Apple Mepu, asi izvi zvachinja nekuuya kwePfupi.
Gadzira nzira pfupi yeWaze kuti utiudze kwekuenda Zviri nyore chaizvo kuita izvozvi uye nhasi tichaona maitiro ekuzviita. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Waze inoenderana neApple CarPlay munyika medu saka izvi zvinogona kuve zvakanaka kune vazhinji vashandisi.
Kumbira Siri kuti akutyaire kuti ushande uye Waze anotiratidza nzira
Hatisi kuzorova takatenderedza gwenzi, toda kukanganisa. Izvi ndozvamungaite shandisa Siri neiyo Waze app uchishandisa Shortcut kutiendesa kumba, kubasa kana chero kwatinoda. Chinhu chekutanga chiri pachena kugadzirisa iyo Waze vhezheni kune yazvino vhezheni 4.48 iyo inotibvumidza kushandisa Siri mapfupi kutyaira nekuchengetedza mapfupi kuita rwendo. Aya ndiwo matanho ekutevera kuti riite ratishande:
Dzvanya pane yekutsvaga yekukudza girazi muzasi kuruboshwe uye wozoshandisa Zvirongwa menyu kumusoro kwepamusoro
Zvino isu tinofanirwa kusarudza Inzwi uye izwi uyezve Siri mapfupi
Ipapo isu tinofanirwa kusarudza nzvimbo kubva pane yedu runyorwa (nzvimbo yaunofarira kana nzvimbo) munzvimbo yepfupi
Isu tinorekodha iro rairo kuraira ratichazoshandisa Siri kuvhura nzira pfupi. Semuenzaniso: "Siri, ndiendese kubasa" uye tinoenderera mberi
Iye zvino tinovhura iyo iPhone Zvirongwa zvekushandisa uye Mapfupi mukati medu tinodzvanya Siri uye Kutsvaga
Isu tinovhura menyu Yangu nzira pfupi uye isu tinosimbisa kuti iwe unogona kuona iyo nzira pfupi kana mapfupi akagadzirwa enzvimbo dzatinoda kuti Wazeç ititorere
Nenhanho idzi dzakareruka, tinogona kungoyedza nzira pfupi yatichangobva kugadzira uye nekuda kweizvi tinofanirwa kukumbira Siri tichikumbira mutsara watakamboshandisa, mune iyi nyaya: "Siri, ndiendese kubasa." Iyo app Waze ichavhura ipapo ipapo uye yotanga kutitungamira takananga kumagumo. Dzimwe nguva iyo Shortcuts app inogona kupunzika, saka usazvidya moyo kana ikasashandira iwe kekutanga.
Waze Navigation uye Trafficvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Shortcuts yave kuwanikwa yeWaze uye tinokuratidza maitiro ekuishandisa
Vaparidzi havana kugutsikana zvizere neApple chikumbiro cheApple News kunyoreswa